Ii-FAQs - iNc Isa yeNkampani kunye neNkampani yezoRhwebo
Siyinkampani eyindibaniselwano yemveliso kunye norhwebo, kubandakanya ushishino kunye noshishino lokudibanisa urhwebo.
Ngaba umzi-mveliso wakho uwenzela njani ulawulo lomgangatho?
Umgangatho yeyona nto iphambili kuthi, siya kwenza isiqinisekiso sangaphambi kwemveliso njengokujonga ilaphu, ukwamkelwa kunye nobukhulu kunye neepateni zokushicilela nokuhombisa, ukuveliswa kwangaphambili kweesampuli zomzimba ezithunyelwe ukuvunywa. Phambi kwemveliso, i-QA yethu iya kunika uqeqesho kumzi-mveliso okanye kumasifundisane wokuhlawula amanqaku aphambili alo myalelo. Ke siya kwenza ngobunewunewu bebhongo kwi-intanethi yokuhlola i-gurantee i-1ST imveliso yemveliso eninzi iyafaneleka; Okokugqibela, xa ukugqitywa kwemveliso eninzi, siya kwenza uhlolo lwethu lwangaphakathi lwe-QC ukwenza ingxelo esemthethweni ye-inspeciton kwaye ukuba iyafuneka, nathi singathumela iisampulu zemveliso ezisisambuku kuwe ukuqinisekiswa kokugqibela ngaphambi kokuthunyelwa.
Ndingafumana isampulu enye? Ngaba kufuneka ndihlawule?
Ukuba sinelaphu elifumanekayo okanye iisampulu ezifanayo, singathumela isampulu simahla. Ukuba unepateni entsha oza kuyiphuhlisa, siqokelela nje iindleko zesampulu yokuhlekisa. Kwaye indleko zokuhambisa ziindleko zakho. Iindleko zesampulu ziya kubuyiselwa kwimveliso yesambuku.
Lithini ixesha lokuhambisa eliphakathi?
Iintsuku ezingama-2-7 zesampulu kunye neentsuku ezili-10 ukuya kwezi-30 zokuvelisa ubuninzi; Ubungakanani obucwangcisiweyo ukusuka kwi-1,000 kwi-PC ukuya kwi-10,000 ii-PC zi malunga neentsuku ezingama-30. Ukuba ngaphezulu kwe-10,000pcs, inokuba ziintsuku ezingama-45 -60.
Ngaba ndingamisela umbala okanye ndinelogo yam kwimveliso?
I-OEM kunye ne-ODM zamkelwe. Esi sisiqubulo sethu: UYILILE, U-ISA WENZA.
Ungasithumela ilaphu lakho lomzimba ukuba ulikope okanye ungasixelela imibala yeepatone hayi.
Okanye sinokufumana uyilo lwakho, emva koko ufumane umbala ovalekileyo wokuqinisekisa kwakho ngobuninzi.
Uyihlola njani imveliso ngexesha lokuvelisa?
Sinesebe le-QC lokulandela izinto ezingavunyelwanga kunye nokugqitywa kokuhlolwa.Isixhobo esikhethekileyo sokuhlola elebhu ukwenza ezinye iimvavanyo eziyimfuneko njengokukhawuleza kombala kunye nokuncipha kwelaphu; Naluphi na uhlolo lweqela lesithathu ukuba luyafuneka lwamkelekile.
Ungahlawula ngeTT, Paypal, L / C njl.
Yeyiphi imveliso ethandwa kakhulu?
Kutshanje, umgca omde onesikipa samadoda esigoso sithandwa kakhulu; Umnatha owomileyo owomileyo ngesitayile se-sublimation kushushu kakhulu kutshanje.
Ubukhulu becala, singamkela iiPC / isitayile esi-100. Kodwa ukuba i-QTY ingaphezulu kwama-1000 eepcs, ixabiso liya kuba kukhuphiswano olukhulu.
Ngaba unalo uphicotho zincwadi?
I-factoy yethu ine-BSCI, iDisney FAMA, iSedex, iWal-mart, iMarvel, iAdapter yoQokelelo oluNgunaphakade.
Athini amagama akho orhwebo?
Sinokwenza i-EXW, i-FOB, i-CIF, iDDP. Ngoku ukuya e-USA, ixabiso lethu le-DDP lilunge kakhulu kuwe.